हालका आईजीपीदेखि धीरजप्रतापले गरेको ‘इन्काउन्टर’ को नालीबेली !
काठमाडौं । प्रहरीको जिम्मेवारी भनेको समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा यि कामहरु प्रहरीले आम नागरीकको सहयोग र सहभागितामा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीको यसै कार्यशैलीलाई सामुदायिक प्रहरी पनि भनिने गरिन्छ । यो बेग्लै समानान्तर प्रहरी व्यवस्था हुन सक्दैन र होइन पनि ।
नेपाल प्रहरी शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने जिम्मेवारी पाएको निकाय हो नकी न्यायिक निकाय । न्यायको इन्साफ गर्ने निकाय अदालत हो । नेपालमा जतिसुकै क्रुरु अपराध गरेपनि मृत्युुदण्ड दिन पाइँदैन् । कानुनमा त्यो व्यवस्था छैन । बलात्कार, हत्या लगायतकाका केही जघन्य अपराधमा अदालतले जन्मकैद तोक्न सक्छ ।
तर, पछिल्लो पाँच वर्षयता महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा नयाँ प्रहरी हाकिम आएपछि ‘इन्काउन्टर’ भएको देखिन्छ । हालका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालदेखि हाल महाशाखाका हाकिम धिरजप्रताप सिंहसम्मले गरेका इन्काउन्टरको नालीबेली यस्तो छ ।
१. दिनेश अधिकारी ‘चरी’
गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ २०७१ साउन २१ गते प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीसँग काठमाडौं र धादिङको सीमामा पर्ने भीमढुंगामा प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिए ।
गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी उर्फ चरी मारिएको काठमाडौं र धादिङको सीमामा पर्ने भीमढुंगा घटनास्थल ।
त्यतिबेला महाशाखाको हाकिम थिए– हालका डिआईजी तथा सिआईबी ब्यूरो प्रमुख पुष्कर कार्की । कार्कीले महाशाखाको कमाण्ड सम्हाल्दै गर्दा प्रहरीको ८ राउन्ड गोली लागेर चरी सडक किनारमा ढल्दा चरीको अपराध यात्रा समाप्त पनि भएको थियो ।
मोटरसाइकलमा भागिरहेको अवस्थामा चरीले फयरिङ गर्न थालेपछि प्रहरीले पनि गोली चलाएको दावी गरेको थियो । त्यसबेला चरी प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा थिए ।
२. कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’
चरी मारिएको एक वर्षपछि २०७३ भदौ ३ गते अर्का गुण्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ मारिए । काठमडौंको सामाखुसीस्थित रहेको घर नजिकै प्रहरीको मुठभेडमा घैंटे मारिएका थिए ।
गुण्डा नाइके कुमार घैंटे मारिएको काठमाडौं, सामाखुसीस्थित घटनास्थल ।
त्यतिबेला महाशाखाको हाकिम थिए– हालका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल । सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी र घैंटेबीच भीडन्त घाइते भएका उनको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
त्यतिबेला खनाल महाशाखाको प्रमुख हुँदा महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सादा पोसाकका प्रहरीले घैंटेसँग सोधपुछ गर्दा उनको समूहले गोली चलाएको र सोही क्रममा जवाफी फायरिङ हुँदा भैंटे मारिएको दावी गरेको थियो ।
३. प्रविण खत्री
लागुऔषध कारोबारमा संलग्न रहेका प्रविण खत्री २०७४ साउन २३ गते प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए । ललितपुरको कुसुन्तीमा खत्रीसँग हतियार रहेको सुराकीको आधारमा महाशाखाको टोली उनको घरमा पुगेको थियो ।
लागुऔषध कारोबारी आरोपित प्रवीण खत्री मारिएको ललितपुर, कुसुन्तीको घटनास्थल।
तर, प्रहरीलाई देख्नासाथ उनले गोली चलाएको र प्रहरी टोलीले जवाफी कारबाहीमा भाग्दाभाग्दै उनी ढले । गोली लागेर घाइते भएपछि खत्रीलाई पाटन अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । तर, चिकित्सकले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरेका हुन् ।
त्यतिबेला महाशाखाको प्रमुख थिए– एसएसपी दिनेश अमात्य । प्रहरीले त्यो दिन बिहानैदेखि खत्रीको पिच्छा गरेको महाशाखाले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
४. टिके डाँका उर्फ टिकाबहादुर थापामगर
२०७४ माघ ४ गते डिल्लीबजार जेल कारागारवाट फरार ‘टिके’ भनेर चिनिने कुख्यात डाँका टिकाबहादुर थापा मगरमाथि प्रहरीले माघ १३ गते चितवनमा गोली चलायो ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले चितवनस्थित रामनगरमा पक्राउ गर्ने क्रममा गोली चलाउँदा हात र खुट्टामा गोली लागेको महाशाखाकाले जनाएको थियो ।
प्रहरी इन्काउन्टरमा घाइते भएपछि अस्पतालमा उपचाररत टिके डाँका उर्फ टिकाबहादुर थापामगर ।
त्यतिबेला महाशाखाका प्रमुख थिए– एसएसपी दिवेश लोहनी । एसएसपी लोहनी हाल ३३ किलो सुुनकाण्डमा पुुर्पक्षका लागि थुुनामा रहेका छन् । त्यतिबेला उनको इन्काउन्टर असफल भएको थियो ।
महानगरीय अपराध महाशाखा र चितवन प्रहरीको टोलीले ना४७प ५०५२ नम्बरको मोटरसाइकललाई रोक्न खोज्दा पछाडी बसेको व्यक्तिले गोली चलाएपछि प्रहरीले पनि गोली चलाएको महाशाखाले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यतिबेला मोटरसाईकल टीकाबहादुर थापाले चलाएका थिए । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ रामनगरमा प्रहरीले मोटरसाइकल रोक्न खोज्दा नरोकेर पछाडी बसेको मान्छेले गोली चलाएको चितवन प्रहरीको दावी थियो ।
५. अशोक लामा/अम्बर तामाङ/गोपाल/अजय
हाल महाशाखाका प्मुख छन्, एसएसपी धिरजप्रताप सिंह । मशाहाखाको कमाण्ड सम्हाल्न आएको तीन महिना नबित्दै सिंहको आदेशमा गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको आरोपमा काभ्रेका अशोक लामामाथि गोली प्रहार भयो । २०७५ जेठ २८ गते युनपार्कमा ।
गुण्डागर्दीमा संलग्न काभ्रेका अशोक लामा प्रहरीको इन्काउन्टरमा घाइते भएपछि अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा ।
लामा सामान्य घाइते मात्र भए । त्यस्तै गत असार ७ गते एसएसपी सिंहको आदेशमा बौद्धमा खुँडे भनिने अम्बरबहादुर तामाङमाथि गोली प्रहार भयो । तामाङ पनि सामान्य घाइते मात्र भए ।
एसएसपी सिंहले महाशाखाको कमाण्ड सम्हालेको ६ महिना पुगेको छ । ६ महिनाको अन्तरमा सिंहको आदेशमा तीनवटा इन्काउन्टर भयो, जसमा २ वटा असफल र एउटा सफल भयो ।
गत साउन २१ गते भक्तपुरका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरण गरेर हत्या गरेको आरोपमा गोपाल तामाङ र अजय तामाङ मारिए । उनीहरु मुठभेडमा मारिएको महाशाखाको दावी छ ।
भक्तपुरका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरण गरेर हत्या गरेको आरोपमा भक्तपुरको पाइलटबाबा आश्रमको जंगल जाने बाटोमा मारिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङ ।
भक्तपुरको पाइलटबाबा आश्रमको जंगलमा प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका गोपालले सिन्धुपाल्चोकका अजय तामाङसँग मिलेर काँडाघारी बस्ने ११ वर्षीय निशान खड्काको अपहरण गरी हत्या गरेका थिए ।
निशानको आमासँग ४० लाख मागेर नपाएपछि हत्या गरेका उनीहरु प्रहरीलाई नै आक्रमण गरेर भाग्नेक्रममा मारिएका हुन् । घटनास्थलबाट प्रहरीले एक थान पेस्तोल, दुई राउन्ड गोली र फिरौती माग्न प्रयोग भएको सिमकार्ड बरामद गरेको थियो ।